Nei injini-yekumhanyisa injini yekutsvaga isiri pfungwa inogoneka | Linux Vakapindwa muropa
Pakutanga Ndakavapindura chirevo che mutongi webato reAustralia rakasvibirira iro el Nyika gadzirisa yako yekutsvaga injini kutsiva Google. Kunyangwe zvichikwezva chikumbiro chinganzwika, zvinogona kunge zvisiri nyore kuzviita.
1.1 Chirevo chakasvibirira
2 Nei iyo injini-inomhanya yekutsvaga injini isiri iyo inokwanisika chirevo
2.1 Indexing uye kutsvaga
Izvo zvese zvakatanga apo Komisheni neVatengi Commission pavakasarudza kutumirar bhiri rinosimbisa nzira yekugadzirisa. Maitiro aya ndeokuzvidira kune echinyakare midhiya asi zvinosungirwa kumakambani eetekinoroji. Chinangwa ndechekusimudzira nhandare nekutora injini yekutsvaga uye Facebook (vanogamuchira mutemo) kutaurirana nenzira dzezvenhau dzekubhadhara mari yekushandisa zvemukati uye nzira idzo shanduko mune yekuisa index algorithm inokanganisa kumira.
Muchokwadi Google haina kuramba yakanyarara uye uku achityisidzira kuenda, akatomhanyira kunotaurirana nevamwe vaparidzi. Padivi rehurumende, vakasarudza kupa ruoko kune vanokwikwidza, kunyanya Bing.
Kune iro chikamu, iyo yepakati-kuruboshwe bato inozivikanwa seiyo maGreens yakaita rayo zano. Mukuburitswa kwepepanhau ivo vakanyora kuti:
Kutyisidzira kweGoogle kusiya Australia kunoratidza kuti hatigone kuvimba nemabhizinesi kuti atipe mabasa akakosha sekuwana ruzivo pamhepo.ku. Uyu mukana wekuti hurumende iongorore kugadzirwa kweinjini yekutsvaga yeruzhinji inogona kunge iri suo reInternet kune veAustralia. Izvi zvaizoreva kuti maAustralia vanogona kutsvaga paInternet nerunyararo rwepfungwa kuti data ravo harisi kutengeswa kune vanoshambadzira nemabhizinesi.
Iyo internet ibasa rakakosha kune vazhinji veAustralia. Nhasi, kuwanikwa kweInternet kunodzorwa nenhamba diki yemakambani ane simba kwazvo. Hatifanire kutsvaga imwe hofori yekune dzimwe nyika yekuzadza chinzvimbo cheGoogle, angave Microsoft kana chero munhu, sezvo vacharamba vachiwana purofiti kubva kudhata revaAustralia uye vachange vaine chikwereti kune zvido zvevanogovana. Injini yekutsvaga yakazvimirira, yeruzhinji inogona kuve nhanho yakakosha pakudzorera yeInternet yakavhurika uye yakavhurika.
Nei iyo injini-inomhanya yekutsvaga injini isiri iyo inokwanisika chirevo
Pane bepa iro girini zano rinonzwika zvakanyanya:
Injini yekutsvaga yeruzhinji inozvidavirira kuruzhinji uye kwete kune vagovani vemabhizimusi inogona kugadziridzwa nemaitiro epasirese epasirese epasirese kuona kuti vashandisi vane yavo data uye vane simba pamusoro pe data rinounganidzwa nezvazvo uye mashandisirwo.
Asi, kune nyanzvi pane zvipingamupinyi zvishoma zvekufunga nezvazvo
Mukutaura, kushanda kweinjini yekutsvaga kuri nyore. unonyora mushoko kana muchirevo uye unogashira runyorwa rwemawebhusaiti ane chekuita nekutsvaga. Asi, Iwe unoona sei kuti ndeapi mawebhusaiti akakodzera uye mune zvakateedzana zvinoratidzwa?
Iwo makuru ekutsvaga injini anoona mhedzisiro zvichibva pamatanho akasiyana kusanganisira nzvimbo, tsvakiridzo dzakapfuura, tsvagiridzo dzakaitwa nevamwe vashandisi vehurukuro imwe chete, nezvimwe.
Uye zvakare, izvo zvakasarudzika zvemutauro zvinofanirwa kutariswa; mazwi anoreva zvakafanana, mazwi ane zvirevo zvakasiyana, typos uye zvisirizvo. Uye, ngatirege kukanganwa izvo zvakasarudzika zvemutauro weChirungu zvekunyora neimwe nzira uye kududza imwe.
Indexing uye kutsvaga
Google yanga ichigadzirisa algorithm yayo kweanopfuura makumi maviri emakore. Kunyange hazvo chiri chokwadi kuti kune mhinduro dzakavhurika dzinogona kutorwa neAustralia kuzvichengetera ivo basa, zvinotora nguva kuti isvike padanho rakaenzana rehunhu.
Asi kana uchinge wave nealgorithm pane rimwe dambudziko. Pedzisa dhatabhesi. Pasina mubvunzo, hurumende yeAustralia inogona kumanikidza nzvimbo dzese dzine domeini yemuno kunyoresa neinjini yekutsvaga, asi haizokwanise kuita chero chinhu nenzvimbo dzinobva kune dzimwe nyika. Naizvozvo, yekufungidzira yekuAustralia injini yekutsvaga ichafanirwa kushandisa nzira yekukambaira pasi rese Wide Web uye indekisi yezviri mukati.
Uye, sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, iwe unofanirwa kuratidza mhedzisiro nekukurumidza. Kubva kuArgentina, Google yakatora isingasviki 1 mineti kuti itore 98000 mitsva yekutsvaga "LinuxAdictos". Pasina kupokana, tiri kutaura nezvekudyara kwakakura mu Hardware.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nei injini-yekumhanyisa injini yekutsvaga isiri iyo pfungwa inogoneka
Haisi pfungwa inogoneka ... munguva pfupi.
Izvo zvichiri kuita senge zano rakanaka kwazvo kwandiri. Uye mukaka! Tiri kutaura nezve Hurumende yeAustralia, kwete chitoro chemakomputa pakona.
Mumakore akati wandei vachiita zvinhu nemazvo vanogona kuve nechinhu chakanyanya, chakadzikama. Pamusoro pezvo, kana vachizviita nenzira yakajeka, vanogona kuve nemitemo yakajeka yezvakabuda pamberi pevamwe, kwete sezvazvino ichi chakavanzika chisinganzwisisike.
Pindura kuna Eska
Ini ndinotenda kuti imwe nzira yeGoogle inogona kuvakwa, asi kwete kubva kune imwe hurumende asi kubva kusangano repasirese, risiri purofiti rakavakirwa paFree Software. Ehezve, pakutanga kwaizove kwakaderera zvakanyanya muhunhu, asi pamusoro pemakore nharaunda pamwe chete vaizokwanisa kugadzira chigadzirwa chinokwikwidza (uye nezvimwe kana iine zvipo uye rutsigiro rwehunyanzvi kubva kuhurumende).
Iyo Internet yakakosha zvakanyanya kuti isiyirwe kumakambani akazvimirira.
Hongu, maawa mushure mekunyora, ndakaona kuti yakanga isiri zita rakanaka. Zvinogoneka harisi iro izwi.
Kunze kwenzira dzinowanzozivikanwa dzinowanzozivikanwa (Duckduckgo ...), paive nechirongwa chinonakidza kwazvo chandisingazive kana ichiri kushanda, asi chaive chakanangana neizvi: